FANAFIHAN-JIOLAHY AMBOHIMANARINA Manomboka tonga ara-potoana ny mpitandro filaminana
Efa nandrasan’ny maro ny fahatongavan’ny mpitandro filaminana ara-potoana rehefa misy fanafihana. Folo minitra teto dia tonga ny polisy ka tra-tehaka ilay mpanao ratsy.
Mitohy ny fisafoana amin’ny alina ataon’ny polisin’ny boriborintany fahenina eny amin’ny faritra Ambohimanarina sy ny manodidina. Ny alatsinainy 9 septambra tokony ho tamin’ny 10 ora alina, nisy lehilahy nisaoty tamboho tao amina orinasa iray eny amin’ny faritra Ambohimanarina.
Tsikaritry ny mpiambina ity tovolahy ity rehefa tafiditra tao an-tokotanin’ilay orinasa ambenany izy ka niantso polisy avy hatrany. 10 minitra taorian’ny antso, tra-tehaky ny polisy teo am-pibatana ireo vy tao amin’ilay orinasa ilay lehilahy. Nosamborina avy hatrany ary nofotorana. Niaiky ny helony avy hatrany izy. Efa natolotra ny fampanoavana ary miandry ny fitsarana azy any am-ponja ny lehilahy.
Fihetsika toy izao no andrandrain’ny mpitandro filaminana hitandrovana ny ain’ny olona. Miantso ny mpitandro filaminana izay arifomba ara-pitaovam-piadiana no vahaolana fa tsy ny miatrika ireo jiolahy mirongo fitaovam-piadiana. Efa miezaka tsy miandry ela aorian’ny antso hatrany ireo mpitandro filaminana.